Sajhasabal.com | Homeयस्ता ६ खानेकुरा बढी खाँदा घट्छ स्मरण शक्ति ! जानी राखौ
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, टाँगियाबस्तीको पीडा कसले सुन्ने ?
के हो मङ्कीपक्स भाइरस, कसरि सर्छ, बच्ने उपाय के के हुन्?
मंकीपक्सको जोखिम बढेपछि सरकारले भन्यो– विदेशबाट आउनेहरु दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नू
विष्णु रिमाल भन्छन्–एमालेलाई ३४ प्रतिशत जनमत, कांग्रेसलाई २९ र माओवादीलाई ११ प्रतिशत
घरघरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने मध्यनेपाल–१० का अध्यक्षको प्रतिबद्धता
गठबन्धनका कारण कैलालीमा दुई महिला उपप्रमुख घटे, संवैधानिक अधिकार हनन् भएको आरोप
सांसदले ताला चाबी बुझाए सभामुखलाई !
डिजेल, पेट्रोल सहित यी हुन् नेपालले १० महिनामा सबैभन्दा बढी रकम खर्चेर आयात गरेको १० वस्तु
हेर्नुहोस आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर, कुन देशको कति?
भारतमा भन्दा नेपालमा महँगो इन्धनको मूल्य !
चीनमा बाढीका कारण १५ जनाको मृत्यु, तीन बेपत्ता
भारतको यो वेबसाइट जसले चिकित्सकलाई मात्र जुराइदिन्छ जोडी
१- चिनि : स्वास्थ्यको सबालमा चिनी जहिले पनि बेफाइदाजनक मानिन्छ । तोकिएको भन्दा बढी चिनि खादा दिमागमा अशर गर्ने पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ । चिनी बढी खाँदा समरणशक्ति हराउछ, सिक्ने क्षमता गुम्छ र श्रवणशक्तिमा समेत ह्रास आउँछ ।
२- बढी चिल्लोः बढी चिल्लो खानेकुरा खाने महिलाहरुको श्रवणशक्ति र स्मरणशक्ति हराउने एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ ।
३- चुइङगमः चुइङगमले पनि श्रवणशक्ति हराउने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । चुइङगमले सबैभन्दा बढी स्मरणशक्तिमा हस ल्याउने अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ
कार्बोहाईड्रेडयुक्त खानाको अभावले पनि दिमागको क्षमता, ऊर्जा र मुड परिवर्तन गरिदिन्छ । कार्बोहाईड्रेडयुक्त खानको सोझै सम्बन्ध स्मरणशक्ति र श्रवणशक्तिमा हुने भएकोले यस्तो खानाको अभावमा श्रवणशक्ति गुम्छ ।
४- नुनिलोः नुनले ह्दयको चाल र रक्तचापलाई असर गर्छ । यसबाहेक नुनले दिमाग र समग्र स्मरणशक्तिलाई असर गर्छन् ।
५- जंक फुडः जंक फुड कुलत हो । र, यो कुलतले दिमाग र स्मरणशक्ति गुमाउँछ । जंकफुडले डिप्रेसन र एंग्जाईटी समेत गराउँछ । जंक फुडले अल्जाईमर्स रोग लाग्छ ।
६- फ्राई खानेकुराः कतिपय स्वस्थ खानेकुरा पनि फ्राई गरेर खाँदा अस्वस्थ हुन्छ । जस्तै माछा खानुका स्वास्थ्यमा फाइदा हुन्छ । तर त्यही माछालाई फ्राई गरेर खाँदा स्वास्थ्यमा समस्या निम्त्याउँछ । अन्य खानेकुरा र मासु पनि फ्राई गर्दा दिमाग कमजोर र श्रवणशक्ति हराउँछ । -टाइम्स अफ इन्डियाबाट
१ सुत्दा ब्रा–पेन्टी खोलेर सुत्नुपर्ने ७ करणहरु यस्ता छन् !
२ महिलाहरुले यौनसम्पर्क गर्नुअघि चाहने १० कुराहरु यस्ता छन् ! जानी राखौ